Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Awwaarotti Guyyaa 30/12/2019 Lola baratoota Federal Jidduutti Taasifame – Kichuu
HomeAfaan OromooTVYuunivarsiitii Amboo Mooraa Awwaarotti Guyyaa 30/12/2019 Lola baratoota Federal Jidduutti Taasifame
Humni kun silaa daangaa Oromiyaa weerara alagaarraa tiksee kabachiisa.
Jeequmsa alagaan keessoo Oromiyaatti uumu tasgabbeessa. Amma garuu sun hafee ilmaan hiyyeessaa walitti qabanii uffata gaarii itti uffisanii ilmaan Oromoo bilisummaa dheebottee manaa baatetti bobbaasan.
Dhiigniifi lubbuun ilmaan hiyyeessaa maaliif mootummaa kana hin mararuu?
Sangaa itti qalanii akka sangaa qaliun kun haa dhaabbatu!!
Suuraan kun warra gara Kibbaatti (Gujii) ergamedha.
#HUBACHIISA UMMATA OROMOO MARAAF;
Sagantaan hayyoonni Oromoo muddee 21-22/2012tti qopheessanii turan kan haqame qaama qopheessen osoo hin taane mootummaa biyyattii bulchaa jirutu fedhe kiyyaan ala jechuun haqe. Sagantaan kun fooramii sabaa yoo ta’u, kan abbummaan qopheesse abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaati.
Kaayyoon fooramii kanaa qabsaa’otafi namoota Oromoof gumaata gurguddaa godhan galateeffachuufi beekkamtii kennuufi ture. Kunumti maaf godhamaaf qophii qabeenyi hunduu itti bahee kana haqsiisan. keessummoonni affeeramanis manaa bahanii bakka karaa walakkaa gahanitti haa hafu jechuun, abbaa sagantichaa qofa osoo hin taane Saba Oromoo guutuu tuffachuu argisiisa. Ilmaan Oromoo sabasaanif gatii baasaniif beekkamtiifi galata galchuun cubbuu maalii qaba garuu? Namni tokko qabeenya qabuun nama maluuf yoo waan fedhe godhe cubbuunsaa maali?
#Ummanni Oromoo guutun akka kana hubatu feena. Beeksifni gaafa 19/4/2012 galgala OBN irratti darbes fedha Korichaatin ala. Wanti ta’e hunduu humnaani.
Kamtu kam ajjeesa egaa?